चाहे तपाईं ठूलो रिटायरमेन्ट कोर्पस निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो बच्चाको उच्च शिक्षाको लागि रकम जम्मा गर्न चाहनुहुन्छ वा मुद्रास्फीतिलाई हराउन चाहनुहुन्छ, दीर्घकालीन लगानी नै बाहिरको बाटो हो। त्यसो कसरी गर्ने? आउनुहोस् पत्ता लगाउनुहोस्।
१) आफ्नो वित्तीय लक्ष्यहरू जान्नुहोस्
दीर्घकालीन लगानीमा प्रवेश गर्नु अघि आफ्नो वित्तीय लक्ष्यहरूको समग्र दृष्टिकोण राख्नुहोस्। कुनै पनि लगानीको अन्तिम उद्देश्य भनेको लक्ष्य हासिल गर्नु हो। तसर्थ, जबसम्म तपाईंसँग आफ्ना लक्ष्यहरूको स्पष्ट बुझाइ र दृष्टि छैन, तपाईं दीर्घकालीन लगानीका लागि आवश्यक कठोरताहरू हासिल गर्न सम्भव छैन।
आफ्ना लक्ष्यहरूलाई तीनवटा फराकिलो बाल्टिनहरूमा विभाजन गर्नुहोस् – छोटो, मध्यम र लामो। छोटो अवधिका लक्ष्यहरूको लागि छ महिनादेखि एक वर्षको समयावधि हुन्छ भने, मध्यम-अवधि लक्ष्यहरूलाई उपलब्धिको लागि सामान्यतया तीन देखि पाँच वर्षको आवश्यकता पर्दछ। अर्कोतर्फ, दीर्घकालीन लक्ष्यहरूमा दस वर्ष वा सोभन्दा माथिको समय क्षितिज हुन्छ।
एकचोटि तपाईंले लक्ष्यहरू थाहा पाउँदा तपाईंले तिनीहरूलाई पूरा गर्न आवश्यक पैसा अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाइँलाई तपाइँको वित्तीय क्रमबद्ध गर्न मद्दत गर्दछ र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाइँलाई बचत गर्न र तिनीहरूको लागि लगानी गर्न उत्प्रेरित राख्छ। त्यसोभए, रेखाचित्र बोर्डमा फर्कनुहोस्, आफ्नो जीवनका लक्ष्यहरू चेक गर्नुहोस्, वित्तको स्टक लिनुहोस् र जानुहोस्।
२) चाँडै लगानी सुरु गर्नुहोस्
दीर्घकालीन लगानीलाई अनुशासन र धैर्यता चाहिन्छ, यो चाँडै सुरु गर्न महत्त्वपूर्ण छ। प्रारम्भिक सुरुवातले वित्तीय अनुशासनलाई आत्मसात गर्छ र खेलमा कम्पाउन्डिङ ल्याउँछ। कम्पाउन्डिङ – संसारको आठौं आश्चर्यको रूपमा स्वागत – सम्पत्ति सृजनमा गुणात्मक प्रभाव छ। यसले तपाईंलाई ठूलो कोर्पस जम्मा गर्न पनि मद्दत गर्दछ।
उदाहरणका लागि, यदि तपाईं २५ वर्षको हुनुहुन्छ र ६० सम्ममा अवकाश लिन चाहनुहुन्छ भने रु.५००० को व्यवस्थित लगानी योजना इक्विटी म्युचुअल फन्डमा १०% को वार्षिक रिटर्न प्रदान गर्दा तपाईंलाई रू.१.९ करोडको कोष प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ। । लगानी गर्न पाँच वर्ष ढिलाइ गरेमा सोहि कोष रु. १.१३ करोड को हुन सक्दछ।
त्यसकारण, प्रारम्भिक लगानी गर्नुको फाइदाहरू यस्ता छन्। यसले तपाईंको पैसा बढ्नको लागि थप समय दिन्छ र तपाईंलाई मुद्रास्फीति काउन्टर गर्न अनुमति दिन्छ।
३) इक्विटीमा लगानी गर्नुहोस्
इक्विटीहरू अस्थिर छन्, विशेष गरी छोटो अवधिमा। यद्यपि, तिनीहरू समान रूपमा इनामदायी हुन सक्छन् र लामो अवधिमा मुद्रास्फीति-कुटाइ रिटर्न डेलिभर गर्ने क्षमता हुन सक्छ। छोटो अवधिको बजार उतार-चढाव पछि डराउनु र बाहिर निस्कनुले काल्पनिक घाटालाई वास्तविकमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।
यद्यपि, इक्विटीहरूबाट मुद्रास्फीति-सूचकाङ्कित रिटर्न कमाउने प्रलोभनले धेरै लगानीकर्ताहरूलाई आफ्नो लगानीमा लामो समयसम्म प्रतिबद्ध रहन प्रेरित गर्छ। र यसका लागि उनीहरूले इनाम पनि पाउँछन्। उदाहरणका लागि, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (WHO) द्वारा कोभिड-१९ लाई महामारी घोषणा गरेपछि मार्च २०२० मा बजारहरू ओरालो लाग्दा धेरै लगानीकर्ताहरूले आफ्नो प्रतिफल रातो श्रेणीमा देख्दा पनि प्रतिबद्ध रहे।
तिनीहरूको लगनशीलताले अन्ततः भुक्तान गर्यो, बजारहरू आश्चर्यजनक रूपमा राम्रोसँग पुन: प्राप्तिको साथ। रिटर्न बढ्यो, र चाँडै लगानीकर्ताहरू मासु लाभमा बसिरहेका थिए। इक्विटी लगानीले लामो समयसम्म प्रतिबद्ध रहन धैर्यता पनि बढाउँछ।
४) बजारको आवाजलाई बेवास्ता गर्नुहोस्
बजारहरू विचार र दृश्यहरूले भरिएका छन् जुन बाक्लो र छिटो उड्ने देखिन्छ, विशेष गरी जब चीजहरू थोरै बाटोमा जान्छन्। अचानक, तपाईंले सबैजना एक विशेषज्ञ बन्न र विचार साझा गर्नुहुनेछ। दीर्घकालीन लगानीको लागि, तपाईंले आवाजहरूलाई बेवास्ता गर्नुपर्छ किनभने तिनीहरू तपाईंको लक्ष्यहरूमा असर पार्न सक्ने विचलनको रूपमा समाप्त हुन्छन्।
तपाईंको वित्तीय सल्लाहकारसँग परामर्श गर्नुहोस्, जसले तपाईंको वित्तीय योजना, स्थिति, र लक्ष्यहरू बुझ्दछ यदि परिस्थितिले त्यस्तो माग गर्दछ। प्राय: बजारको कोलाहलले लगानीकर्ताहरूलाई आवेगमा काम गर्न बाध्य बनाउँछ, जसले गर्दा त्रुटिपूर्ण लगानी निर्णयहरू हुन्छन्। त्यसकारण, ठूलो तस्वीर हेर्नुहोस् र आफ्नो लक्ष्यहरूमा प्रतिबद्ध रहनुहोस्।
तपाईं टेस्ट म्याच जित्नको लागि ब्याटर्स वा बलरमा पूर्ण रूपमा निर्भर हुन सक्नुहुन्न। जबकि व्यक्तिगत प्रतिभाले तपाईंलाई एक वा दुई खेल जित्न मद्दत गर्न सक्छ, यो जित्नको लागि सामूहिक प्रयास चाहिन्छ। यो दीर्घकालीन लगानीको लागि समान हो। तपाईं एक वित्तीय साधनमा निर्भर हुन सक्नुहुन्न वा बरु गर्नुहुन्न।
विभिन्न सम्पत्ति वर्गहरू – इक्विटीहरू, बन्डहरू, सुन, इत्यादिमा तपाईंको होल्डिङ्सलाई विविधता दिनुहोस्। एक सम्पत्ति वर्ग भित्र पनि विविधीकरण गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, इक्विटीहरू भित्र, ठूलो-क्याप, मिड-क्याप, र सानो-क्याप कोषहरूमा आफ्नो लगानी फैलाउनुहोस्। विविधीकरणले तपाईंको पोर्टफोलियोमा स्थिरता र सन्तुलन जोखिम र पुरस्कार प्रदान गर्नेछ।
इष्टतम विविधीकरण एक प्रभावकारी जोखिम हेजिङ रणनीति हो। एक आधारभूत लगानी सिद्धान्त, इष्टतम विविधीकरणले पनि प्रतिफल बढाउँछ किनभने बजार घटनाहरूले प्रत्येक सम्पत्ति वर्गलाई फरक रूपमा असर गर्छ।
दीर्घकालीन लगानीका लागि आवधिक समीक्षा चाहिन्छ किनभने परिस्थितिहरू समयसँगै परिवर्तन हुन्छन्। समीक्षा गर्नाले तपाईंलाई पछाडि परेकाहरूलाई हटाउन र तपाईंको लक्ष्यहरूको आधारमा तपाईंको लगानीलाई अनुकूल बनाउन मद्दत गर्नेछ। दीर्घकालीन लगानीका धेरै फाइदाहरू छन्। सही तरिकाले गर्नाले तपाईलाई ठोस वित्तीय खुट्टामा रहन र आर्थिक स्वतन्त्रताको बाटोमा रहन मद्दत गर्न सक्छ।
स्रोत: फोर्ब्स सल्लाहकार